कोभिडको त्रास : अस्पताल डुलाउँदा-डुलाउँदै दुईको मृत्यु – Naya Kura Daily
कोभिडको त्रास : अस्पताल डुलाउँदा-डुलाउँदै दुईको मृत्यु
August 12, 2020 69
झापा- कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको जनाउँदै स्थानीय अस्पतालहरु उपचारमा पन्छिएपछि झापामा आज दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
मेचीनगर –५ का ११ वर्षीय सागर तामाङ र कनकाई–५ का १७ वर्षीय रोशन सुनारको मृत्यु भएको हो ।
फुटबल खेल्दा सामान्य घाइते भएका दुवैलाई ज्वरो आउने र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो ।
अस्पतालहरुले पीसीआर परीक्षणबाट कोभिड –१९ नभएको रिपोर्ट ल्याएपछि मात्र उपचार गर्ने भनी एकले अर्कालाई रेफर गरेका कारण अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै दुवैको मृत्यु भएको थियो ।
सोमबार ज्वरो बढेकाले तामाङलाई उपचारका लागि राति १ बजे बिर्तामोडको कनकाई हस्पिटल पुर्‍याइएको थियो ।
कनकाईले बालकलाई बिएण्डसी हस्पिटल लैजान सिफारिस गरेको थियो । बिएन्डसीले पनि धरान लैजान सिफारिस गरेको थियो ।
बिएण्डसी हस्पिटलले छातीको एक्सरे गरेपछि निमोनिया भएको ठहर गर्दै कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्ने आशङ्कासहित बिरामीको पीसीआर परीक्षण गर्न र धरान लैजान सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि बालकको उपचार अभावमै बिहान ४ बजेतिर मृत्यु भएको थियो ।
यसैगरी कनकाईका सुनारलाई गएराति उपचारका लागि बिर्तामोडको बिर्तासिटी हस्पिटल लगिएको थियो । बिर्तासिटीले कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको जनाउँदै अन्यत्र लैजान सिफारिस गरेपछि उनलाई कनकाई हस्पिटल लगिएको थियो ।
कनकाईले मेची अञ्चल अस्पताल लैजान सिफारिस गरेको थियो भने मेची अस्पतालले आइसीयु खाली नभएको जनाई भद्रपुरकै ओमसाई पाथीभरा हस्पिटल पठाएको थियो । ओमसाईले कोभिड–१९ परीक्षण नभएको जनाई मेचीमै फर्काएको थियो । त्यसपछि मेची अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो ।
मेचीनगर–५ का वडाध्यक्ष योगेश थापा मगरले अस्पतालहरुले उपचार नगरी अन्यत्र पठाउने गरेकै कारण बिरामीको मृत्यु हुनु सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड भएको बताए ।
‘कोरोना महामारीको समय छ भन्दैमा अन्य बिरामीको उपचारै नगरी बेवास्ता गर्नु ठीक भएन’, वडाध्यक्ष थापाले भने, ‘उपचार नै नगर्ने हो भने हस्पिटल हुनु र नहुनुको के अर्थ रह्यो ?’
बिएण्डसी हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले ज्वरो आएका बालकको उपचार गरिएको तर कोरोनासँग मिल्दोजुल्दा लक्षण देखिएपछि कोभिडको परीक्षण हुने र उपचार हुने अस्पतालमा लैजान सिफारिस गरिएको बताए ।
कोभिडको उपचार र पीसीआर परीक्षण बिएण्डसी हस्पिटलमा नहुने हुँदा शङ्कास्पद बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु बाध्यता भएको उनको भनाइ थियो ।
झापामा मेची अञ्चल अस्पतालमा मात्र कोभिड –१९ को पीसीआर परीक्षण र उपचार हुने गरेको छ । पच्चीस शय्याको आइसोलेशन वार्ड भने सङ्क्रमितले भरिएका छन् । -रासस
Prevफेसबुक पोष्टले भारतको बैंगलोरमा हिंसा, प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको मृत्यु
Nextडोटीमा बस दुर्घटना : तीनको मृत्यु, ३२ घाइते
ओली-वामदेव साइनो : बालुवाटारमा दुष्ट, भैंसेपाटीमा इष्ट !
इन्धन बोक्ने ट्याङकर बिस्फोट
बहिनी भेट्न आमालाई मोटरसाइकलमा बोकेर डडेल्धुरा जाँदै गरेका शंकरको बाटोमै गयो ज्यान, आमाको अवस्था गम्भिर
डा. योगिता गौतमको विभत्स हत्या (2951)
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (2861)
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (2475)
विवाह गरेको ७ दिनमै विदेशिएका श्रीमानलाई दुवईमा मृत्युदण्डको फैसला, अझै पनि उनको आशमा १७ वर्ष देखि बसेकी छन् धनिषा (1852)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (1782)
जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित (1777)
असल श्रीमानको खोजीमा यि करोडपति यु’वती ! यसरी स’म्पर्क गर्नुहोस् – (1722)
गर्लफ्रेण्ड भेट्न सिड्नी गएका नेपालीले गर्लफ्रेण्डकै साथीलाई रक्सी खुवाइ बलात्कार गरेपछि… (1613)
मानव बलि दिए कोरोनाको महामारीबाट मुक्त भईन्छ भन्ने सपनामा दर्शन पाएँ त्यसैले दिएँः पुजारी ओझा (1469)